warkii.com » Akshay Kumar godkiisa ayaa biyo ugu soo galay Diwali waxaan arki doona isku dhac weyn ee u dhaxeeya Salman Khan iyo Akshay Kumar
Akshay Kumar godkiisa ayaa biyo ugu soo galay Diwali waxaan arki doona isku dhac weyn ee u dhaxeeya Salman Khan iyo Akshay Kumar
maalmahan dambe waxaa Bollywoodka ka bilaabmay dagaal kaaso qof walba uu doonaayo inuu ku guuleysto waxaana dhawaan la arkay isku dhacyada filimo waa weyn kuwaaso ku hartamayn Boxx Office
iyadoo ka dib markii la shaaciyay aflaamta kala ah Sooryavanshi kaaso ay ku midoobayn Akshay Kumar , Katrina Kaif , Director Rohit Shetty la daawan doono feestada Diwaliga halka Kabir Khan filimkiisa uu hogaamiyaha ka yahay aktarla Ranveer singh ee ’83 la daawan doono ciida Chrismaska
Si kastaba ha noqotee marka laga reebo labadan filim, waxaa lays weydiiyay goorta la daawan doono Salman khan filimkiisa Radhe maadaama aktarkan looga bartay inuu aflaamtiisa la daawado fasaxyada ugu waa weyn dalka hindia waxaana kaliya sanadkan kasoo haray labo fasax kuwaaso kala ah Diwali iyo Chrismas waxaana hore loo qorsheeyay aflaamta kala ah Sooryavanshi iyo 83
Hogaamiyeyaasha filimka Radhe kaaso ugu horeeyo aktarka Salman Khan ah ayaa sheegayaan inay qorsheynayaan in filimkan tiyaatarada la saaro feestada Diwali isagoona Salman diyaar u ah inuu dagaal weyn la galo Akshay Kumar iyo Rohit Shetty iyo weliba Karan Johar
waxaana u muuqataa in Salman Khan, oo hada karantiil la jooga qoyskiisa gaar ahaan gurigiisa beerta ah ee Panvel, uu isku dayi doono inuu ku laabto Mumbai
maalmaha soo socda si uu u kormeero shaqada soosaarida filimkiisa halka Director filimkan Prabhu Deva wax laga weydiiyay xaalada filimka ayaa waxa uu yiri, “duubista ayaa ku dhawayf ​​dhameystirka Waxa naga hadhay xoogaa muuqalo ah ah. Tan waxaan daryeeli doonnaa ka dib markii xiritaanka looga yeedhay Mumbai. Marka haa, inta lagu gudajiro shaqada soosaarida kadib waa ay sii socon doontaa. ” Markii la weydiiyay haddii Radhe uu siideyn doono Diwali, filim sameeyaha wuxuu yiri, “Ma awoodo inaan ka faalloodo taas. Waxay ku xiran tahay Salman iyo Arbaaz.